सिंहदरवारको ‘पुनर्निर्माण’मा झमेला : ‘काम न काज’ करोडौं खर्च !
काठमाडौं, २५ माघ– १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पले जीर्ण बनेको सिंहदरवारको पुनर्निर्माण गर्ने विषयमा अझै पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र शहरी विकास मन्त्रालयबीचको विवादले सिंहदरवारको पुनर्निर्माण अन्यौलमा परेको हो ।
‘यसअघि गरिएको अध्ययनले सिंहदरवार भत्काए पनि हुने, नभत्काए पनि हुने भन्ने खालको निष्कर्श निकाल्यो,’ मानन्धरले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘तर बास्तवमा गर्नुपर्ने के हो ? भन्ने विषय त्यो अध्ययनले देखाउन सकेन ।’
विनायोजना पैसा खर्च
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सिंहदरवारको पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म पनि विस्तृत योजना बनाउन सकेको छैन । बिस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने भनिएपनि अध्ययन पछिको तयारीका बारेमा प्राधिकरणका अधिकारी अनविज्ञ छन् ।
‘अध्ययन गर्ने भनिएको छ । अध्ययनले अहिले रहेको भवन भत्काउने भन्ने निष्कर्श निकाल्यो भने के गर्ने ?’ प्राधिकरणसँग तालुक राख्ने निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘सिंहदरवार पुनर्निर्माणका नाममा प्राधिकरणले विनायोजना रकम खर्च गरिरहेको छ । केही कर्मचारीका लागि पैसा पचाउने बाटो मात्रै भएको छ । देखिने गरी एउटा पनि काम भएको छैन ।’
इतिहास बनाउने कि काम लगाउने ?
पुरातात्कि विज्ञहरु सिंहदरबार ‘दरबार’ मात्रै नभएर इतिहास समेत भएकाले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा भत्काउन नहुने पक्षमा छन् । सरकारी कामकाज सञ्चालनका लागि अर्को भवन बनाएर सिंहदरवारलाई रेट्रोफिट गरेर इतिहासका रुपमा जगर्ने गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
तर केही सरकारी अधिकारी भने सिंहदरवारको भवनलाई प्रयोगमा ल्याउने गरी पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने पक्षमा छन् ।